The Cliff of Moher, fitsidihana manokana any Irlandy | Vaovao momba ny dia
The Cliff of Moher, fitsidihana manokana any Irlandy
Mariela Carril | | Irlandy, Inona no ho hita
Ny toetrandro, ny herin'ny natiora ary ny fotoana dia namokatra endrika mahafinaritra manerana an'izao tontolo izao. Any Irlandy, ohatra, firenena misy perla fizahan-tany maro Cliff of Moher.
Ny fihaonana tampoka teo amin'ny tany sy ny ranomasina teto dia nanjary endrika mahafinaritra sy mahatalanjona, nahatonga azy io ho iray amin'ireo mpizahatany malaza indrindra eto amin'ity firenena eropeana ity. Fantatrao ve izy ireo? Raha tsy izany no izy dia tandremo fa avelanay eto ianao fampahalalana azo ampiharina ka amin'ny manaraka fitsidihana any Irlandy aza malahelo azy ireo.
1 Ny hantsam-bato any Moher
2 Ahoana ny fomba hahatongavana amin'ny Cliff of Moher
3 Tsidiho ny Cliff of Moher
4 Mividiana tapakila ho an'ny Cliff of Moher
Ny hantsam-bato any Moher
Any Irlandy izy ireo amin'ny faritanin'ny faritany, ao amin'ny faritra fantatra amin'ny anarana hoe Burren. Izy ireo dia misy vatosokay ary karazana vato sedimenta vita amin'ny fotaka sy mineraly samihafa nipoitra maherin'ny 300 tapitrisa taona lasa izay. Raha ny marina dia mbola azo atao ihany ny mahita ilay lavaka navelan'ny renirano taloha nanapaka ny vatolampy teo am-pototry ny hantsana, izay toerana misy ilay vatolampy tranainy indrindra.
Ny hantsana eo afovoan'ny lalan'ny fizahantany amoron-tsiraka fantatra amin'ny hoe Wild Atlantic Way izy ireo, zotra iray 2500 kilometatra azo atao an-tongotra, amin'ny fiara na bisikileta. Manakaiky ny seranam-piaramanidina iraisampirenena Shannon ihany koa izy ireo ary akaikin'ny tanànan'i Galway sy Limerick.
Ny làlana ofisialy na Cliff of Moher Walk Mandeha 18 kilometatra miala ny Hag's Head mankany Doolin ary misy ny fitsidihana ny Visitor Center sy ny O'Brien Tower malaza izay toerana malaza. Ho setrin'izany, misy làlambe roa manakaiky ny ivon-toeran'ny mpitsidika, ny tompon'andraikitra iray izay azo antoka kokoa ary ny iray tsy dia atahorana intsony satria mihakaiky kokoa amin'ny sisiny.
Ahoana ny fomba hahatongavana amin'ny Cliff of Moher
Azonao ampiasaina izany bus fitateram-bahoaka, bisikileta, tongotra ary fiara. Eto dia zava-dehibe ny dia satria toy ny tantaran'i Ithaca, ny dia dia zava-dehibe kokoa noho ny toerana haleha. Raha mampiasa ny fiara ianao dia afaka manofa iray na aiza na aiza ao amin'ny firenena na amin'ny tanàna akaiky an'i Galway na Limerick.
Misy toerana fijanonana eo akaiky eo, eo alohan'ny ivon'ny mpitsidika ary azonao atao ny mividy ny tapakilan'ny fidirana eo. Miaraka amin'ny tapakila, tafiditra ao ny fijanonana tsy voafetra.
Raha manana motera ianao dia tsara ny hifandray amin'ny tranokala ofisialin'ny hantsana satria tsy maintsy mitahiry toerana iray ianao. Azonao atao ihany koa ny tonga amin'ny taxi avy any amin'ireo tanàna nomenay anarana teo aloha. Ary mazava ho azy amin'ny fiara fitateram-bahoaka lavitra, indrindra eo anelanelan'ny aprily sy septambra.
Avy any Limerick, Ennis, Cork, Galway na Dublin ianao dia afaka manakarama ny fitsangatsanganana an-andro amin'ny bus ary avy any Dublin dia maharitra iray andro ny fitsidihana. Amin'ny 7 maraina izy ireo no miala ary miverina amin'ny 7 hariva.
Afaka mandeha any lamasinina ihany koa ianao. mandray lamasinina any Dublin mankany Ennis amin'ny alàlan'i Limerick ary avy eo mampiasa ny bus. Ny tanàna Irlandey rehetra dia mifandray amin'ny lamasinina ka mora izany. Raha manapa-kevitra ny handeha amin'ny làlana ianao dia tsy maintsy mankany Doolin aloha satria manomboka eto ny làlana izay manaraka ny morontsirak'ireo hantsana.
Avy any Doolin ka hatrany amin'ny hantsam-bato dia misy 8 kilometatra ary raha te-hihoatra ny lalan'i Hag's Head ianao dia 12 kilometatra.
Misy maro zotra bisikileta Mamakivaky ny harambato sy ny morontsirak'i Clare izy ireo amin'ny ankapobeny. Lonely Planet dia nilaza fa ny County Clare dia iray amin'ireo toerana tsara indrindra eran'izao tontolo izao mitaingina bisikileta ka ... Ny zava-misy dia amin'ny alàlan'ny bisikileta no ahafahanao mankafy ny morontsiraka volamena ao amin'ny Atlantika, mandehandeha amin'ny tanàna mankany amin'ny tanàna ary amin'ny pub ka hatramin'ny pub ary ny mifamadika amin'izany. Azonao atao ny mahazo sarintanin'ireo zotra ao amin'ny ivon'ny mpitsidika ary ny bisikileta dia afaka manofa any amin'ny tanàna maro manodidina, Doolin ohatra.
Raha mampiasa ny bus fitateram-bahoaka ianao dia afaka misambotra mivantana ny bus ao Galway na Dublin. Ireo bisy dia Bus Eireann mihazakazaka in-dimy isan'andro izy ireo amin'ny fahavaratra eo anelanelan'ny Ennis sy Galway sy ny sisa amin'ny taona telo isan'andro.
Tsidiho ny Cliff of Moher
Ny hantsana sokafy mandritra ny taona ankoatra ny 24, 25 ary 26 desambra. Amin'ny volana Janoary sy Febroary dia manokatra izy ireo manomboka amin'ny 9 maraina ka hatramin'ny 5 hariva, ny martsa sy aprily dia manomboka amin'ny 8 maraina ka hatramin'ny 7 hariva ary eo anelanelan'ny Mey sy Aogositra eo anelanelan'ny 8 maraina ka hatramin'ny 9 hariva. Ny volana septambra sy oktobra dia manomboka amin'ny 8 maraina ka hatramin'ny 7 hariva ary ny novambra ary desambra manomboka amin'ny 9 maraina ka hatramin'ny 5 hariva.
Raha liana amin'ny fitsidihana fampirantiana manokana eny amin'ny hantsam-bato eo afovoan'ny mpitsidika ianao dia andramo ny mandeha eo amin'ny 20 minitra alohan'ny hikatonanao. Iray amin'ireo toerana manandanja indrindra amin'ny hantsam-bato amin'ny fananganana taloha fantatra amin'ny hoe Tilikambo O'Brien Na dia misokatra isan'andro aza izy, dia manana ora samihafa arakaraka ny fotoan'ny taona. Misy kafe, atrikasa fanaovana asa tanana ary fivarotana fahatsiarovana.
Aza adino ity azafady misy fiatraikany amin'ny fitsidihana ny harambato ny toetr'andro koa miezaha hanana drafitra miovaova. Ny vanim-potoana avo dia ny Jolay sy Aogositra fa hahita olona marobe koa ianao manomboka amin'ny volana aprily sy septambra. Ny fotoana ratsy indrindra handehanana raha tianao ny mangina dia eo anelanelan'ny 11 maraina ka hatramin'ny 4 hariva. Y raha afaka misoroka tsara kokoa ianao amin'ny faran'ny herinandro.
Mikasika ny toetrandro dia misy loko maromaro misy loko mavo, volomboasary sy mena hanasokajiana ny toe-piainany: mena, mazava ho azy, mihidy ny foibe ary miala ny olona raha misy olona manodidina. Azonao atao ny manamarina an'ity amin'ny tranokala ofisialy.
Mividiana tapakila ho an'ny Cliff of Moher
Mba hitsitsiana fotoana dia azonao atao foana ny buy online. Ny tapakila dia ahitana ny fampitaovana ireo faritra ivelany sy anatiny, ny fidirana amin'ny ivon-toerana mpitsidika sy ny fampirantiana ary ny fijanonany.
Amin'ny Internet dia afaka mamandrika tapakila sivy ianao. Ny vidiny isaky ny olon-dehibe dia 6 euro ary ny zaza hatramin'ny 16 taona dia afaka. Mpianatra sy mihoatra ny 65 taona dia mandoa 4 euro. Ny marina dia ny fanaovana ny famandrihana sy ny fividianana an-tserasera no tsara indrindra, avy eo dia mila mankafy fotsiny ianao. Raha tsara ny andro dia hanana fomba fijery mahavariana momba ny Nosy Aran any Galway Bay sy ny tendrombohitra misy anao ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Fialantsasatra any Eropa » Irlandy » The Cliff of Moher, fitsidihana manokana any Irlandy
Mankanesa any Santiago de Compostela amin'ny alàlan'ny Camino del Norte
Inona no ho hita ao an-tanànan'i Leuven